Safarka Warshadaha | Piedra (Xiamen) Sawirka Sawirka Co., Ltd.
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD., sidii shirkad farshaxan leh oo leh naqshadeeyayaal iyo warshadheena, oo leh khibrado aad u tiro badan oo ku xardhan farshaxannada birta, sanamyada naxaas ah, farshaxannada maqaarka lagu qurxiyo. Waxaan had iyo jeer u fidinaa alaab tayo wanaagsan, kontarool tayo sare leh, adeeg fiican ka dib iibka macaamiisha. Qanacsanaantaadu waa dhiirrigelintayada si aan u abuurno farshaxanno aan la rumaysan karin oo cajaa'ib leh.
Sawirada Gaadiidka iyo Xirmooyinka:
OEM iyo ODM labadaba si diiran ayaa loo soo dhaweynayaa! Macaamiil kastaa wuxuu bixin karaa sawir, 3D sawir ama CAD tixraac ahaanna, markaa waxaan sameyn karnaa farshaxan sida ku cad sawirka iyo macaamiisha 'shuruudaha dheeraadka ah. Waxaan isku dayi doonnaa sida ugu fiican ee aan u sameyn karno farshaxanimada oo aan u ilaalinno xuquuqda macaamiisha' nashqadeheeda. Weligaa kama qoomameyn doontid inaad nalashaqeyso markii ugu horeysay.
Ku soo dhawow inaad nala soo xiriirto haddii aad xiise u leedahay farshaxan kasta. Dhammaan farsamooyinka farshaxanka, midabka, qaabka ayaa loo habeyn karaa sida aad rabto.
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD., had iyo jeer waxay haysaa xamaasad si loo barto xirfad iyo fikrado cusub, ka dibna la abuuro naqshado cusub oo lagula kulmo macaamiisha dhadhankooda kala duwan. Haddii macaamiisha jecel yihiin farshaxanka casriga ah iyo muraayadda muraayadaha, waxay dooran karaan farshaxannada birta oo aan kala badnayn. Hadday tahay taariikho gaar ah oo macquul ah, waxay dooran karaan taallada naxaas ah. Hadday tahay farshaxan fudud oo rakhiis ah, sawir-gacmeed loo yaqaan 'fiberglass sculpture' waa xulasho wanaagsan iyaga.
Ku soo dhawow inaad nala soo xiriirto haddii aad xiise u leedahay farshaxan kasta.
Dhammaan farsamooyinka farshaxanka, midabka, qaabka ayaa loo habeyn karaa sida aad rabto.
Cinwaanka: QOLKA 1407, CHANGAN BLDG, NO.75-77 LVLING ROAD, HULI DISTRICT, XIAMEN, 361009, FUJIAN, CHINA
Taleefoonka Ganacsiga 1: 00-86-8264336, 00-86-13950080662
Taleefoonka Ganacsiga 2 : 00-86-13950110440
Taleefoonka Ganacsiga 3 : 00-86-13600922114
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD. waa kuwo khibrad aad u sareeya leh isla markaana horeyba alaabada ugu dhoofiyay dalal badan, gaar ahaan Ameerika, Yurub, sida Norway, Aasiya sida Malaysia, Indonesia, Singapore, Israel iyo wixii la mid ah.
"Si wanaagsan ula dhaqan macaamiisha, si aad ah u tixgaliso sumcadda shirkadeed iyo tayo wanaagsan si loo qanciyo dalabka macaamiisha" waa fikradda maareynta shirkadeena. Waxaan si daacad ah u rajeyneynaa inaan horumarino oo aan lashaqeyno macmiil walba, kaasoo abuuri kara ganacsi dheer iyo xiriir saaxiibtinimo oo midba midka kale ka dhexeeya. Runtii soo dhawow macmiil kasta oo cusub oo nala soo xiriira haddii ay xiiseynayaan wax farshaxanno ah.